Hiran State - News: HS:- Professor Jawaari oo u amba baxay dalka Ethiopia
HS:- Professor Jawaari oo u amba baxay dalka Ethiopia
HS:-Guddoomiyaha baarlamaanka Somalia iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta u dhoofay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, iyadoo safarkan uu noqonayo kii ugu horreeyay oo uu dalka kaga ambabaxo tan iyo markii uu qabtay xilkaan culus ee loo doortay.
Professor Jawaari ayaa safarkiisaan waxuu qeyb ka yahay dadaalo ay masuuliyinta dowlada ku hagaajinayaan xiriirka wadamada deriska ah iyo beesha caalamka tan iyo markii ay talada dalka la wareegeen sedax masuul ee ugu sareysa wadanka.
Gudoomiyaha iyo waftigisa oo casuumaad rasmi ah ka heylay gudoomiyaha baarlamaanka Ethiopia ayaa lagu wadaa in ay labada baarlamaan ka wada hadlaan sida ugu haboon ee ay wada shaqeyn u dhax mari laheyd mudanayaasha labada dal.
Inkasta oo uu safark gudoomiyaha yahay kii ugu horeeyey ee uu dalka uga baxo hadane tan iyo markii la doortay ilaa manta waxuu caasimada Soomaaliya ku qaabilay wafuud kala duwan oo ka socotay wadamada daneeya dalka Soomaaliy oo ka mid ah wadamada ugu hodansan caalamka, dadkiisuse ay ka baahan yaiin qeyraadkaas.
Sikastaba waftiga gudoomiyaha ayaa lagu wadaa mudada ay halkaas joogaan loogu so dhaweyn doono hab maamuus ka duwan kuwii lagu soo dhaweyn jiray gudoomiyaashii kumeel gaarka ahaa oo iyagoon xitaa casuumaad heysan iska aadi jiray dalalka dibada ilaa ay dowladaha qaarkood idaacadaha ka sheegaan oo ay dhahaan masuulkii wadankeena yimaada oo aysan dowladeenu casuumin isagaa masuul ka ah nabad galyadiisa xili ay wasiiro iyo xildhibaano badan maqaayadaha Nariobi iska fadhiyi jireen.
· admin on February 13 2013 16:49:25 · 0 Comments · 1666 Reads ·
14,588,886 unique visits